Qurbajoog Booqatay Degmada Danbal - Cakaara News
Sidaad Wararkayagii hore kula socoteenba waxaa Booqasho u tegay Degmada Awbare Qurbajoog ay Hogaaminayeen Qaar ka mida Madaxda Heer Deegaan iyagoona Degmada Awbare ka Dib Booqday Degmada Danbal iyagoona ka galay Tuulada Dirri oo si wayn loogu soo dhaweeyay iyagoona Booqday Dhul-beereed aad u wayn oo uu Maalgashi ku sameeyay Nin ka mida Qurbajoogta u dhalatay Degmada Danbal laguna magacaabo Mustafe waxaana igu Dhiirigaliyay ayuu yidhi Mar uu Madaxwaynaha DDSI Socdaal noogu yimid Yurub nooguna baaqay in aanu dhulkayaga maalgashano.
Waftigan ayaa tuulo walba oo ay sii maraan siwayn oo meeqaan sare ah loogu soo dhawaynayay iyaga oo intii ay socdeena booqday beer way oo ay ka soo go aan wax soosqar aad u balaadhan waxaana lagu soo dhaweeyay oo casuumad qado sharafeed ah loogu sameeyay magaalada Gogto.
Waftiga ayaa Qadar-nasiimo ka dib kulmo la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka magaalada gogti.
Waxaana kale oo siwayn loogu soo dhaweeyay magaalada araabi oo ka tirsan degmada danbale waxayna booqteen meesha la yidhaahdo biyo kulul oo ah meel biyo-dabiiciya ka soo burqanayaan kuwaasoo ahbiyo aad u kulul pp dabiici ah iyo meel ay ka soo burbanayaan biyo qabow waana khayraad ilahay ku manaystay deegaankena.
Waxayna waftigani goor 6:00 galabnimo ah galeen magaalada danbal oo ka tisan gobolka halkaasi oo siwayn loogu soo dhaweeyay aroornimadii maanta ayaa waxay ka soo anaba baxeen magaalada danbal.
Waftiga ayaa intii ayna soo galin jijiga ku soo hakaday magaalada jaare oo si aad baladhan loogu soo dhaweeyay waftiga waxayna halkaasi si wada jir ah ula hadleen dadwaynihii ku soo dhaweeyay magaaladaasi waxayna sheegeen in ay siwayn oo farxadi ku dheehan tahay loogu soo dhaweeyay dhamaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay soo marayeen islamarkaana ay siwayn ugu mahadnaqayaan bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi,